गोगंबुमा खुल्यो बुटिक होटल ‘होटल ह्वाइट हाउस’ | रेडियो झापा 100.7 MHz.
गोगंबुमा खुल्यो बुटिक होटल ‘होटल ह्वाइट हाउस’
रेडियो झापा 100.7 MHz. बुधबार, मंसिर २९, २०७८ १३:२२:१८
पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गी तथा निर्मल शर्माद्वारा संयुक्त रुपमा होटल ह्वाइट हाउसको उद्घाटन गरिएको छ। गोंगबु बिजी मलको अपोजिट रहेको सुबिधा सम्पन्न होटलको आफ्नै बिसेश्ताहरु रहेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रमा हस्तकलादेखि आधुनिक उत्पादनसम्म पाइने एक मात्र होटलको रुपमा स्थापित भएको छ। २४ घण्टा नै सेवा प्रदान गरिने होटल ह्वाइट हाउसमा प्रत्येक रुममा चिसो तातो पानि, फ्री वाई फाई, मिनिबार तथा आरामदायी बेडको ब्यबस्था गरिनुको साथै होटलमा रेस्टुरेन्टको ब्यबस्था गरिएको छ।
बुद्ध शाहीले सञ्चालनमा ल्याएको होटलमा जम्मा १२ वटा रुम रहेका छन् । प्रत्येक रुममा फरक फरक इन्टिरियर डिजाइन गरिएको छ । होटलका केही रुममा अपार्टमेन्ट सिस्टममा तयार गरिएको छ । जसमा बस्ने गेस्टले आफ्नै घरमा झैँ खाना बनाएर खान सक्नेछन् ।